Mai Chibwe VekwaZimuto: Kusiyana pazera, murume nomukadzi
Ukatarisa vanhu vakawanda vakaroorana unoona kuti havasi vezera rimwe chete. Zvinokwanisika kuti murume mukuru pamakore kana kuti mukadzi ndiye mukuru. Kune nyika dzakaita sedzechiArabhu, zvinoonekwa kuti lazhinji murume ndiye mukuru asi tinonkwanisa kuwana pamwe mukadzi ari mukuru. Muporofita wavo wenhema uyu ainzi Mahamadhi aiva nevakadzi vana. Mukuru wacho ange ari mukuru pamurume, kozoitazve chimwana chaakaroora apfuura makore makumi mashanu change chichinhuhwa mukaka chine makore 9 pakuwanikwa.
Kana wasangana noumwe munhu, mukanyengana mukadanana watopfuura pawanga une mukana wekubvunza kuti ane makore mangani. Kana wange wabvunza akakuudza iwe ukada kudanana naye, wazvipa kwaari saka zera rake hauchinei naro asi kungoti pane nyaya dzatinoda kutaura pano dzinokwanisa kubatsira vaya vuura. Izvi zviri munyika dzese kwete yedu chete. achiri kusarudza wekudanana naye.
Varume vane dambudziko rokushaya CONFIDENCE panyaya dzerudo. Varume vakawandisa vanotya mukadzi ane njere kana kuti akadzidza kuvapfuura, ane mari kuvapfuura, anogona chimwe chinhu kuvapfuura. Izvi zviri kunyika dzese kwete kwedu chete. Saka varume kuti zvivabatsire kuona sokuti va kachenjera uye vanotambira mari yakawanda uye vakadzidza, vanoti oda kuroora anonoroora musikana mudiki paari kureva kuti haana kumbowana mukana wekudzidza kana kushanda kana kuita chimwe chinhu chakapfuura chemurume uyu. Zvinoitigwa kuti murume agare ane munhu waanodarika kuita zvinhu saka anogara ane CONFIDENCE yake.
Kotizve panyaya yeRHOJI inova inoitika mumba kuvanhu vakaroorana, varume vanoda kuudza vakadzi zvokuita kuti agofamba achizvirova dundundu achiti ndiye akadzidzisa mukadzi kuvhura makumbo. Hakuna mukadzi anowanikwa asingazivi kuti achanosvikorhojewako. Hakuna mukadzi asingazivi kuti kurojewa kunoda kuita manhede wovhura makumbo, kufongora , kuvata nedivi wosimudza gumbo, kisa mabvi pachifuva kana kukwira murume. Cheri chisikana chine makore 9 chinokuudza izvi. Asi varume vedu vanofunga kuti ibasa ravo kutidzidzisa nokuti vakuru patiri.
Kotizve nyaya yokudzvanyirira vakadzi kugaropa maCOMMANDS kuita sokuti murume ndiya Sajeni Meja. Unohwa rino rume rakagwinya rinoti kana richikukoira wenge waiswa guyo pamusoro izvo munhu, richikuudza zvokuita
Enda unondiitira tii
Ndiainirewo hembo iyo
Chienda unofanodziisa mubhedha
Ndiisire mvura yokugeza.
Zvese izvi zvinoitiswa nokusahwisisa kuti isu tinofarira kusevha varume vedu. Ukatarisa imba inomukadzi nomurume navanakomana uchaona kuti mukadzi anongoitira vana vake zvaanoitira murume wake kuvagezesa, kuvabikira kuvaainira zvese. Ipapo iye mukuru pavana ava asi haazvioni. Zvinoreva kuti zera romukadzi harinei nezvaanoita kumurume wake. Murume murume chete. Zvokuzoda kukomandha izvo kuda kuti murume agotyiwa nomukadzi. Hazviwedzeri kana kutapudza zviito zvomukadzi kumurume wake. Mukadzi chaanongoda kuziva kuti murume wake anomuda. Akangohwisisa ipapo zvese zvinodiwa nomurume anoita pasina mubvunzo.
Saka tichitaura chokwadi, panyaya idzi, kuroora mukadzi mudiki pauri hazvina chazvinokubatsira.
Kana uchisarudza murume sarudza wakachenjera. Varume vanonoka kukura zvinoreva kuti murume ane makore 18 akainzana paMATURITY yake nomusikana ane makore 15. Zvese zvaanofunga zvinotanga zvabvunzwa chombo kuti nhaiwe chombo unobvuma kuti zvandafunga ndizvo here. Kana chombo chikati ndizvo iye oona zvirizvo. Akaona munhukadzi haaoni munhu ipapo. Anoona mazamu nemagaro chete zvokuti pamwe haatombozivi kuti musikana wacho ange akaita sei somunhu asi kungoti mazamu makuru, magaro makuru, chete. Zvinotomubhowa kuti musikana ange akapfeka dhirezi. Fungwa yemurume wezera iri inongoona pasina dhirezi saka usafunga kuti kupfeka kwawakaita kunei naye pakuona kwake. Ukatarisa mumabhuku e FEMINISM ndiyo nyaya huru iyi vakadzi vachikomburena kuti varume vanotiona sokuti tiri maOBJECTS hatisi vanhu. Saka zviri kwese mupasi rese izvi. Ku INDIA ne SOUTH AFRICA nyaya dzokubatwa chibharo dzinoitika 1 per minute. Hino iwe uchisarudza murume wosarudza achiri kufunga nechombo ziva kuti uchakasira kuita mateya nokuda kwekungorhojewa pasina zvimwe zvamuri kuvaka. Ndosaka vakadzi vachida murume ati kurei nokuti mufungwa ndiye wezera rake.
Pakusarudza mukuru uyu varume vanoona sokuti ndivo vasarudza. Hazvina ADVANTAGE kumurume kuti zera romukadzi riri papi nokuti vakadzi vari PREDISPOSED kusevha varume vavo. Murume ane makore 18 akaroora mukadzi ane makore 50, mukadzi achangoitira murume wake zvese zvinoitwa nomukadzi ane makore 18 akawanikwa nomurume ane 50. Hwisisai apa.
Murume munhu anokwanisa kumisa chombo kusvika ava namokore kana 90 chaiwo kana achingova noutano. Murume ati kurei akaroora mukadzi wechidiki, anokasira kuhwisisa kuti mukadzi wake ndewezera diki saka anofanira kurhojewa kakawanda sezvinoita vechidiki. Anoziva kuti mukadzi wake akasagutsva achitanga kushamwaridzana nevarume vechidiki vanokwanisa kumupa ma SUPPLIMENTS. Saka murume akadai anowanzochengera mukadzi uye kubata mukadzi zvakanaka.
Mukadziwo chero achikwanisa kunyorova zasi nokwanisa kupinzwa chombo. Kana mukagaroisana mese munongogara muchiita zemo. Hazvinei kuti uri murume here kana mukadzi. Tinoona vanhu vanoroorana vari muOLD PEOPLE’s HOME vachitovatana zvinongoita vechidiki. Saka a pa zera romurume kana mukadzi harinei nazvo.
Pakunorhojana murume ati kurei anononoka kupedza zvokuti mukadzi wake anogara akaguta. Vechidiki vanoona sokuti kurhojana inyaya yemaRHOUNDHI. Kwahi “Nhai Mai chibwe, ndinofanira kukwira mukadzi wangu kangani pazuva?” kuita sokuti kangani ndiko kugutsa. Ini ndotsanangura ndoti kaviri paziuva kanogutsa chose asi koira maminitsi anosvika 15 uri mukati, uchapiwa rukudzo kusvika machembedzana. Zvinonetsa kuti vahwisise, Kwahi ndichamupa RHOUNDHI yekutanga ndozomumukira futi pakati peusiku. Kusaziva kuti hapana zvawaita pese ape kuzhe kwekumushaisa hope nokumubhowa zvisingaiti. Murume wechikuru anohwisisa apa saka anowanzira mukadzi vese voita hope dzakanaka.
Chinoita kuti varume vade mukadzi wechidiki panyaya iyi ndechokuti haazotauri kuti haana kuguta. Anongogwadziwa akanyarara.
Peak yevakadzi nevarume
Murume anosvika pa PEAK yekurhoja ane makore 25 Mukadzi anozosvika ava 28. Saka kana uri mukadzi uchida murume akakwanirana newe pakurhojana wotsvaka murume mudiki pauri nemakore matatu. Kana uri murume woroora mukadzi mukuru pauri. Zvinorevazve kuti uchagarorhojewa kwenguva yakareba nokuti kurhojewa kunonontsa kumira kuzvara, saka uchaenda kumwedzi kwemakore akawedzera kupfuura vaya vane varume nyope vasingavagutsi.
Mukadzi mukuru pamurume haatyi kutaura zvaanoda kuti murume wake aita saka murume anogara achiziva kuti mukadzi wake anoda zvipi. Dambudziko revakadzi vasingatauri zvavanoda kuitwa nevarume vavo idambudziko guru kuvakadzi nevarume. Zvinonetsa kuudza murume mukuru pauri nemakore kuti haasi kukugutsa. Zvinomupa stress chaiyo zvokuti anobva awadzera kuchengera, kuri kutya kuti unonogutswa kumwe. Mukadzi anotaura zvaanoda anokasira kugadzirisa nyaya dzenyu poshaika zvinodya moyo.
Varume vakawandisa vane upenyu hupfupi pae hwevakadzi munyika dzese. Mu UK vakadzi vanoita makore ten kupfuura varume. MuZimbabwe mazuvano vakadzi vari pasi pevarume nemakore anosvika 4 asi izvi zvakaitiswa nezvigwere zvechihure. Zvigwere izvi zvisati zvauya muZimbabwe maingovawo nechirikadzi dzakawanda kupfuura varume vakafigwa pangari yokuchembera. Kana ukaroorana nomukadzi mudiki pauri anokuchengeta wachembera. Kana ukaroorana nomukadzi mukuru pauri ndiwe unomuchengeta achembera. Asizve kashoma kuti mukadzi anochembera zvokutadza kuchengeta murume wake.
Kana mukadzi apedza kuzvara, anoita nguva yakareba achiwanza zemo nokuti kutya kubata mimba kunenge kwapera. Vekwedu vanotangira pa makore 45 zvichikwira (Average) KuEurope vanopedza kuzvara vachiri vadiki kuma 40.
Kana uchizvichengeta haukasiri kuunyana kumeso uye kungoita tsinga dzakati tande tande mumakumbo. Mukadzi anozvibata anongotaridzika chero akura. Saka hazvinei nokuti mukuru here kana mudiki pamurume. Munongochembedzana makadaro. Mukadzi ane murume wechidiki anononoka kuchembera iri ngari yokugarorhojewa zvakagwinya.
Mukadzi mukuru pamurume anobata murume zvakanaka kupfuura mukadzi mudiki achiri kudzidzawo nezveupenyu. Mukubatwa zvakanaka murume anogara akagadzikana hana yake asina zvinomunetsa.
Mukadzi mukuru haanetseki nenyaya ye SECURITY zvokuti anohwisisa kuti mhuri inofanisa kurongwa uye zvinobvumiramwa. Mukadzimukuru anoitwa nyaya naye kwete kungoudzwa zvimwe akanyarara.
Saka tiri kuti kudiiko pano?
Tiri kuti mazera evanhu pakudanana kwavo haanei nokudanana. Kana wasarudza waunoda uchitiziva zvaari izvozvo, chigadzirai upenyu hwenyu mese moita mhuri yenyu mese kwete kugarofunga kuti mudiki kana kuti mukuru. Nakigwa noumwe wako chete. Zera handiro rinoda munhu. Zera handiro rinonaka. Nyaya dzemumba dzinonetsa vanhu dzakawanda asi ishomanana dzinobva pamazera evanhu.
Kune varume vanozodawo kuroora zvivana zvichangobva pazamu iri nyaya yokuda kudzvanyirira. Kupokana kwavo nevakadzi vavo kunobva pakuramba kudzvanyirigwa kwete pakuti mazera akasiyana.
Tiudzeiwo vane nyaya idzi mumba kuti pane nyaya here dzine musoro dzinobva pakusiyana zera.
Posted by Mai E Chibwe at 07:18
Older woman ari looser ku vagina yake pane younger woman. Is this not so?
chinenge chaitisa loose munhu ari pasi pemakore 65 chiiko. hazvisirizvo . mukadzi anokwanisa kuva loose kwemavhiki akati kuti kana azvara mwana asi zvinokasira kuperea zvikuru kana achisimbisa. mukadzi ati kurei anohwisisa kusimbisa ndiye anotoshinya kupfuura wechidiki. varume zvimoita sokuti havahwisisi nyaya iyi. vamwe vanofunga kuti kukura kwe chombo chomurume kunodhambhisa chitubu. handizvo.
Ndatumigwavo link ye blog renyu, ndatenda zvikuru nedzidziso yandawana pamapeji uyezve munonyatsopa tsanaguro nechiKaranga, zvokwadi munodadisa! Ndatumiravo vene vangu vakati kuti Link ye Blog renyu!